Diyo post :: घरमा चर्पी भए मात्र बन्दुकको लाईसेन्स ! घरमा चर्पी भए मात्र बन्दुकको लाईसेन्स ! - Diyo post
घरमा चर्पी भए मात्र बन्दुकको लाईसेन्स !
एजेन्सी २ असार । नियम पनि कति अनौठा ? हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको मध्य प्रदेशको राजगढमा घरमा चर्पी हुनेलाई मात्र बन्दुकको लाईसेन्स दिने नियम छ । मध्य प्रदेशमा यस्ता धेरै ठाउ छन् जहाँ घरमा बन्दुक राख्नु प्रतिष्ठाको विषय हुन जान्छ । त्यसैले बन्दुक राख्नका लागी प्रशासनमा बर्षेनी सयौ निबेदन पर्ने गर्छन् ।
राजगढमा पनि एउटा वर्गले बन्दुक राख्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउछन् । सो जिल्लामा हरेक वर्ष सातसय जतिले बन्दुकको लाईसेन्सका लागी निबेदन दिने गरेका छन् । अहिले त्यहा सार्वजनिक ७ हजार संग बन्दुकको लाईसेन्स छ ।
तर अबचाही त्यहाँका बासीन्दाले बन्दुकका लाइसेन्सका लागी घरमा चपी भएको प्रमाण समेत संगै बुझाउनुपर्ने छ । त्यसपछि कागजात अनुसार उनीहरुको घरमा चर्पी भए नभएको प्रत्यक्ष रुपमा नै कबुल नाममा गराएर सोही अनुसार नै बन्दुकको लाईसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिने छ । स्वच्छ भारत अभियानलाई सफल पार्नका लागी सो जिल्काका विभीन्न गाउमा सो उपाय अपनाउने गरिएको छ ।
त्यहाँ धनी तथा सम्पन्न परिवारलाई पनि घरमा सौचालय नभएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । केहि समय पहिले सिहोर जिल्लामा एउटा घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ एउटा किसान आफ्नी बुहारीलाई लिनका लागी हेलिकप्टरमा गएका थिए । तर हेलिकप्टर चढ्ने हैसियत भएका ती किसानको घरमा सौचालय भने थिएन । प्रशासनको आग्रहमा पछि ती किसानले घरमा सौचालय बनाउनु परेको थियो ।